Maalgelinta barnaamijka suuqgeynta gudbinta saxda ah ee meheraddaada ayaa muhiim ah waana inay noqotaa qayb muhiim u ah istiraatiijiyad kasta oo koritaan ah. Laakiin maalgelinta softiweerinta gudbinta gudbinta maahan mid ku saabsan "si dhaqso leh u taaji." Waa maalgelin qiimo leh.
Lacag gelinta softiweerka suuqgeynta gudbinta iyo teknolojiyadda waxay ku saabsan tahay kor u qaadista meheraddaada iyo kordhinta faa'iidooyinka muddada fog. Iyo, iyadoo taasi ay ku imaanayso qiimo, waxay u badan tahay inay ka hooseyso sidii aad u malayn lahayd.
Iyada oo la adeegsanayo software -ka suuq -geynta gudbinta, aad uma badna inta aad qarashgareyso; waa sida aad u isticmaasho. Ma rabtaa wax la jaanqaadaya fikradaha shirkaddaada oo ka dhigaya shaqadaada mid sahlan oo ka fiican? Ma aha inay noqoto maalgashi la taaban karo. Dhammaan waxay ku timaaddaa samaynta doorashada ugu fiican.
Iyadoo liisannadu ay ku kacayaan meel kasta dhowr senti illaa kumanaan doollar; iyo qaar leh kharashyo hal mar ah, kuwa kalena ay ku kacayaan lacag bil walba soo noqnoqota, marna muhiim ma ahayn in la miisaamo dhammaan xulashooyinka ka hor inta aan la maalgelin softwares-ka suuqgeynta gudbinta.
Haddii aad leedahay shirkad bilow ah ama aad maamule guud ka tahay hawlgal isku dhafan, ma aha in qof kastaa uu aamminsan yahay buunbuuninta ah in maalgelinta barnaamijyada suuqgeynta suuqgeynta ay dhiirrigelinayso koritaanka ganacsiga iyo in la dhihi karo waa maalgashiga ugu ammaansan ganacsi kasta.
Tani waxay ugu dambayntii la macno tahay inay haystaan ​​waqti dheeraad ah oo ay kaga shaqeeyaan hawlaha kale ee muhiimka ah sida la shaqaynta macaamiisha iyo iibinta. Markaad haysato teknolojiyadda cusub, waxaad sidoo kale heli doontaa habab cusub oo aad uga sarreyn karto shirkadaha kale - ha ahaato iyada oo loo marayo farsamooyinka suuq -geynta casriga ah, nidaam ka awood badan, ama wax -soo -saarka la fududeeyay.
Badanaa, waxaan shaqaaleysiinaa dadka si ay u qabtaan hawlo daallan oo aan caqli -gal ahayn, kaliya maxaa yeelay waxay umuuqataa dariiqa iska -caabbinta ugu yar. Laakiin tan labaad ee aan bilowno baarista xalalka howlahan suuq -geynta gudbinta, waxaan ogaannay in qaar badan oo iyaga ka mid ah si otomaatig ah loo awoodi karo wax yar oo aan kharash lahayn. Tani waxay u oggolaanaysaa kheyraadka aadanaha in ay diiradda saaraan hawlaha suuq -geynta gudbinta ee aan la is -hagaajin karin.
Shaqaale suuq -geyn wax -ku -ool ah oo wax -ku -ool ah, oo, wax kasta oo ka sarreeya, ayaa ku faraxsan in aan loo xilsaarin shaqo aan caadi ahayn. Adiga oo iibsanaya software -ka suuqgeynta gudbinta saxda ah, waxaad si dhakhso ah u ogaan doontaa inay si joogto ah u soo rogaan cusboonaysiinta suuqgeynta gudbinta. Cusboonaysiinta softiweerka ayaa badanaa loo soo saaraa si adeeggu u noqdo mid hufan, soo bandhiga astaamo cusub, iyo hagaajinta khibradda guud ee adeegsadaha (UX).
Markaad go'aansanayso waxa aad ku maalgelinayso meheraddaada, tixgeli waxa ka caawin doona inay si dhakhso leh u koraan oo joogto ah. Markaad maalgeliso softiweerka suuq -geynta gudbinta, waxaad ku maalgelinaysaa kartida labada barnaamij ee suuqgeynta gudbinta iyo shirkaddaada.
Markaad maalgashato softiweerka suuq-geynta gudbinta, waxaad u sameyneysaa maalgashi muddo-dheer ah ganacsigaaga. Waxa ugu weyn ee ku saabsan maalgelinta softiweerka suuq -geynta gudbinta ayaa ah in faa'iidooyinka ay socon karaan sanado. Maaddaama software-ka saddexaad ee aad maal-gashato uu hagaajinayo shaqaynta iyo hufnaanta, wuxuu ku koraa oo kaliya qiimaha iyo cimriga.
In kasta oo tikniyoolajiyaddu aysan ahayn waaxda ugu xasilloon, haddana waa mid had iyo jeer soo koreysa. Maalgelinta softiweerka hagaajinaya hababka ganacsigaaga marar dhif ah waa go'aan qaldan.
Maalgelinta wareejinta wareejinta Suuq-geynta Barnaamijka - Iibsashada a barnaamijka softiweerka suuq geynta ama SaaS micnaheedu waa inaad aasaas u tahay guusha ganacsigaaga. Lacagta aad hadda isticmaashid qiimaheedu wuu kobcayaa iyadoo ganacsigaagu ka faa'iidaysto maalgashiga.
Tusaale ahaan, maalgashiga aad samayso muddo sannad ah barnaamijka softiweerka suuq -geynta gudbinta ama SaaS waxay dhalin kartaa saamiyo aad u sarreeya marka loo eego maalgashiga shaqaale u shaqeeya kaliya shirkaddaada wax ka yar hal sano. Wareejinta shaqaalaha waxay leedahay kharash aad u badan oo la xiriira. Iyada oo la adeegsanayo software -ka suuq -geynta gudbinta, taasi maahan arrin.
Haddii aad samayso ikhtiyaarrada maalgashiga software -ka gudbinta wargelinta ee xog -ogaalka ah, waxaad xiriir xirfadeed la yeelan doontaa shirkadda aad doorato. Waxaad sidoo kale u badan tahay inaad ku xirmi karto oo aad la xiriiri karto meherado kale oo adeegsada farsamo isku mid ah ama la mid ah.
Iyada oo ay weheliso wax -ku -oolnimada, software -ka suuq -geynta gudbinta saxda ah ayaa kordhin kara wax -soo -saarka. Tani waxay si gaar ah run u tahay haddii softiweerka suuq -geynta gudbinta ee aad maal -gashato uu fududeeyo SOP -yadaada hadda oo uu ka dhigo hababka ganacsiga qaarkood kuwo otomaatig ah. Iyada oo ku xidhan software -ka gudbinta gudbinta ee aad doorato inaad maal gashato, waxay u badan tahay inaad kor u qaadi doonto wax -soo -saarka nidaamyadaada iyo shaqaalahaaga.
Muhiimad ahaan, waxaad dib u iibsaneysaa waqtiga shaqaalahaaga, oo waxaad siineysaa waqti dheeri ah si ay u noqdaan kuwo wax soo saar leh marka la qabanayo howlo cusub.
Markaad isticmaaleyso softiweerka ugu dambeeyay, shati haysta ama alaabada SaaS ee saddexaad si aad u maamusho hawl-maalmeedkaaga, shirkaddaadu waxay ku shaqaysaa nabadgelyadeeda. Shirkadaha softiweerinta suuq -geynta gudbinta ee aad maalgalinayso kalsoonidaada, waa inaad aad u qiimeysaa kalsoonidaas. Sumcadoodu waxay ku tiirsan tahay ilaalinta xogtaada; iyo xogta macaamiishaada oo nabdoon.
Waa uun hab kale oo lagu maal-galiyo softiweerinta suuq-geynta gudbinta macno ahaan waa go'aan muddo dheer ah. Waxaad ballaarineysaa shirkaddaada adigoo ilaalinaya hantidaada, fikradahaaga, iyo xogta macmiilkaaga. Xitaa haddii qiimaha badeecada softiweerka suuqgeynta gudbinta qaarkood ay u muuqato mid sare, waxaa mudan maalgashiga haddii ay ka dhigan tahay badbaadin. Badanaa, maalgelinta softiweerka gudbinta saxda ah waxay samayn kartaa ama jabin kartaa ganacsi.
Ganacsi kasta waa inuu qaadaa tallaabooyin ku habboon si loo sugo macluumaadka qarsoodiga ah ee ay kaydinayaan. Maalgelinta nidaamyada ilaaliya xogta macmiilka ee xasaasiga ah ma aha oo kaliya hab lagu yareyn karo halista jebinta xogta, laakiin sidoo kale waxay u adeegi kartaa meel wax lagu iibiyo marka kor loo qaado ganacsigaaga macaamiisha.
Teknolojiyadda cusubi waxay timaadaa fursado cusub. Wax kasta ilaa heerkani waxay xusayaan fursadda koritaanka iyo horumarka. Taasi waa run oo dhan.
Waa tan xaqiiqo; kaliya shirkadaha iyo badeecadaha soo baxa ayaa ka badbaadi kara meelaha sare iyo hoos u dhaca dhaqaalaha adduunka. Markaad samayso xulashooyin horumarsan oo leh maaliyadda ganacsigaaga, waxaad ogaan doontaa in meheraddaadu aysan sii noolaan doonin; way kobci doontaa. Haddii aan la helin maalgalin software suuq -geyn gudbin ah, shirkaddaadu way guuldaraysan doontaa sababtoo ah ma awoodi doonto inay koraan.
Hadday taasi macnaheedu tahay Software yar oo Adeeg ah (SaaS) iibso si aad u hagto nidaamyadaada ama aad u maal gasho iskaashi muddo dheer ah oo leh shirkad softiweer ah oo suuqgeynta gudbinta, waa wax aan la dafiri karin ma jiro waqti la mid ah waqtigan si aad u weydiiso su'aalaha adag. Markaad tilmaamto halka ay tahay in maalgashigaagu aado, waa waqtigii la samayn lahaa.